आइतबार, ५ आषाढ, २०७३
मनमा नि अनेक कुराहरु खेलिरहन्छन । आज अनौठो कुरो खेल्यो, ‘जुसर’ को हो, फलफूल पेलेर जुस निकाल्ने जुसरको । प्रायः सबैको भान्सामा हुन्छ यो आजभोलि । चिज पनि गज्जबको, भएभरको फलफूल पेल्दिन सक्ने क्षमता भएको, जुस पिउन पनि मज्जा आउने । अनौठो त जुसर होइन, यसको काम नै फलफूल पेलेर जुस बनाउने हो, अनौठो प्रसंग त त्यो जुसर बेच्नलाई टिभीमा फलाक्ने नानाथरीको विज्ञापनको हो ।
टिभीमा जुसरको विज्ञापन प्रस्तोता घोक्रो सुक्ने गरी भन्छन्, ‘हामीले खाएको फलफूल वा कुनै खाने कुरा पेटमा पुगेपछि पाचन गर्न सक्ने गरी मसिना कणहरुमा परिणत गर्छ अनि शरीरले आवश्यक पौष्टिक तत्वहरु सोस्ने गर्दछ ।’ ऊ अझ प्रष्ट्याउन खोज्छ, ‘यस जुसरमा फलफूल पेलेपछि पाचन प्रणालीले गर्नुपर्ने आधाजसो काम त्यसै कम हुन्छ र शरीरले पौष्टिक तत्व तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्छ ।’ विज्ञापनकै अन्तरालमा उक्त जुसर उपयोग गरी जुस पिउन थालेपछि यति किलो घटाएँ उति किलो घटाएँ भनी ब्यवसायिक प्रयोजनका लागि राखिएका मोडलहरु बोलिरहेका हुन्छन् । मोटोपनको समस्या झेलिरहेकाहरुलाई त ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तो हुन्छ होला, जुस पनि पिउन पाउने, तौल नि घट्ने, चाडै नै स्वस्थ पनि हुने भनेर आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो ।
यो जुसरको विज्ञापन हेरेपछि सधै दिमागमा चक्र घुम्ने गर्छ, पेटले गर्नु पर्ने आधा काम नै घटाइदिने । वाह ! कस्तो टेक्नोलोजी आयो ! अचम्म पर्छु, यसो घोत्लिन्छु, आफ्नै शरीरको पाचन प्रणालीको कल्पना गर्छु । चपाउनको लागि दाँतहरु छन्, स्वादको लागि जिब्रो छ अनि खानेकुरालाई नरम बनाउनको लागि मुख भित्र ¥याल निस्कने गर्दछ । फलफूल होस् या खानेकुरा मुखभित्र छिरेपछि पाचन प्रणालीको पहिलो र एकदम सरल प्रक्रिया हो चपाउनु । खानेकुरा मज्जाले चपाउँदा उक्त खाने कुराहरु मुखभित्रै मसिना टुक्राहरू बनिसकेका हुन्छन भने पेटभित्र डाइजेस्टीभ एञ्जाइम (पचाउन मद्धत गर्ने तत्व) सक्रिय हुन थाल्छ । मसिना टुक्रा खानेकुराहरु पेट भित्र छिरिसकेपछि पुनः मसिना कणहरुमा त्यहि डाइजेस्टीभ एञ्जाइमले टुक्रयाउने काम गर्दछ ताकि सजिलैसँग रक्त प्रणालीमा सोसिन सकोस अनि शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्वहरु लिने प्रक्रिया अगाडि बढोस् ।
अब आफै कल्पना गर्नुहोस्, एउटा स्याउ खानु र जुसरले पेलेको त्यहि एउटा स्याउको जुस पिउनुमा कति भिन्नता हुन सक्छ । एउटा स्याउ खाँदा मात्रै अघाएको महसुस हुन्छ भने एउटा स्याउबाट निस्केको जुस पिउदा त्यहि अनुभूति लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा शंकै लाग्छ । जुसरको विज्ञापनमा भनिएजस्तै जुस पिउदा पक्कै पनि पाचन प्रणालीको मेकानिकल प्रक्रियालाई वाइपास गरिन्छ भने के चपाएर खाँदा जसरी नै पेटमा उत्तिकै डाइजेस्टीभ एञ्जाइमहरु सक्रिय होलान त? खाए जत्तिको जुसबाट शरीरले आवश्यक तत्वहरु पुरै लेला त? आशा गर्छु विज्ञानले यसको पनि छिनोफानो गर्दिने छ । एउटा सिङ्गंै फल खानुभन्दा जुस पिउनु नै स्वस्थकर हुन्छ भन्ने ठोस प्रमाणहरु अझै रहस्यमय नै छ । बरु, सिंगो फल चपाएरै खाँदा बोक्रा (खान मिल्ने) र गुदीबाट पाइने फाइबर भने जुसमा निकै कम हुन् सक्छ । खाने कुरालाई दाँत बलियो हुन्जेल चपाउनुपर्ने हाम्रो पाचन प्रणालीको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । जसले मुखभित्रको संसारलाई सक्रिय बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेकै हुन्छ । पाचनक्रियामा मद्धत गरिरहेकै हुन्छ । यसो भनिरहँदा जुस पिउनुको अर्थ छैन भन्न खोजेको हुँदै होइन । मौसमअनुसार घरमै फलफूल पेलेर जुस पिउनु राम्रै हो तर विभिन्न फलफूलको जुस मात्रै पिएर वजन घटाउँछु भन्नु अलि सान्दर्भिक नहुन सक्छ । यसरी जुसमा मात्रै निर्भर हुँदा केही केजी वजन त घट्छ नै तर लामो समयसम्म पिउँदा भने शरीरलाई चाहिने ठोस आहारको कमी हुँदै जान्छ र थप अरु शारीरिक समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि पनि जुस धेरै पिउँदा यसमा चिनीको मात्रा धेरै हुँदा शरीरले उपयोग गर्न नभ्याएको चिनी बोसोमा परिणत भएर बसिदिंदा वजन घट्ने प्रक्रिया ढिला हुन सक्छ ।
हुन त जुसर खरिद गर्नु सबैको आफ्नै इच्छाले हो । समय—समयमा जुस पिउनको लागि उपयोग गर्न उपयुक्त नै हुन्छ तर विज्ञापन हेरेरै त्यहाँको मोडलले भनेको सुनेर र मोडललाई देखेर तौल घटाउन लालायित हुनेहरु यस्तो जुसरप्रति आकर्षित हुने गर्छन र खरिद गर्छन पनि । कुनै पनि जुसरले पेलेको जुस पिएर मात्रै तौल भने पक्कै घट्ने होइन । थोरै घटे पनि विज्ञापनलाई प्रभावकारी देखाउने प्रयोग गरेका मोडलहरु त्यही जुस मात्रै पिएर त्यस्तो भएको चै कदापी हुन्नन् । याद गर्नुहोस्, शरीरको तौल घटाउन शरीरले नै मद्धत गर्छ, शरीरले नै काम गर्नुपर्छ, लामो समयसम्म फलफूललगायत अरु ठोस खानेकुराहरुको साटो जुस मात्रै पिउँदा दाँतले चपाउन पाउदैन । ¥यालबाट निस्किने एञ्जाइममा कमी होलान, शरीरले लिन सक्ने फाइबरमा गिरावट आउन सक्ला, अनि स्वस्थ हुने प्रक्रिया झन् लम्बिन सक्ने सम्भावना बढ्ला । तौल घट्छ भनेर मात्रै महंगो जुसर किन्दा आर्थिक भार त थपिने नै भयो, मोटोपन नघटेर बेकार किनेछु भनेर पश्चाताप नहोला भन्न सकिन्न ।
(फिटनेस कोचर श्रेष्ठ फिटनेस मोटिभेटर पनि हुन् । उनी अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित फिटनेश नेपालसँग आवद्ध छन् । फिटनेस सम्बन्धि केहि जिज्ञासाहरु छन् उनको इमेलमा लेखेर पठाउन सकिनेछ ।)